Kupa Inoenderana Yevashandisi Chiitiko neHTML5 | Martech Zone
Kupa Inoenderana Yevashandisi Chiitiko neHTML5
Chitatu, Kukadzi 20, 2013 Chitatu, Kukadzi 20, 2013 Jenn Lisak Golding
Nzvimbo yemusika yemusika yakatsemurwa kupfuura nakare kose, uye nekufamba kwenguva, inogona kutonyanya kutsemuka.
tsva tsvakurudzo na comScore Inc. kuvhara kota yekupedzisira ya2012 kunoratidza kuti Android yakachengeta nzvimbo yayo seiyo inonyanya kufarirwa OS munzvimbo yenhare. 53.4% ​​yemidziyo yemagetsi zvino inomhanya paApple OS, uye izvi zvinomiririra 0.9% kukwira kubva kukota yapfuura. Apple iOS masimba 36.3% ezvese nhare mbozha, asi yaona kukura kukuru munguva ino, iine kuwedzera kwe2% kubva kukota yapfuura. Kuwana kweApple kunoratidzika kunge kurasikirwa kweBlackBerry, sezvo chishandiso ichi chinongoshanda chete ne6.4% yevanoshandisa foni zvine hungwaru, iko kuri kurasikirwa kwe2% kubva kukota yechitatu. Dzimwe nzvimbo dzinogarwa nevatambi vadiki vakaita seWindows, Symbian, nevamwe.
Iwo manhamba anoratidzira Android sesimba rinotungamira munzvimbo yemafoni, zvakadaro, anonyengera. Vashandisi ve iPhone vanoita ecommerce kupfuura zvinoita vashandisi veApple. Uyezve, vashandisi ve smartphone havasi boka rakafanana. Multiple zvishandiso zvinomhanya pane ino OS, uye chishandiso chimwe nechimwe chinosiyana zvakanyanya pascreen saizi uye mamwe maitiro. Kunyangwe Apple yeApple, kusvika zvino, ichipa kuenderana pamadhizaini, zvinoita kunge inoenda nenzira yeApple, iine iPhone 5 iine saizi yakakura yescreen kubva kune yakatangira. Nemidziyo mitsva uye yakawanda yemhando dzakasiyana siyana uye saizi yechiratidziro yakagadzirira kuvhurwa, uye kunyangwe masystem matsva ekushandisa akadai seAroid neUbuntu, ese akagadzirirwa kupinda munzvimbo yemafoni. Nekuda kweizvozvo, zvicharamba zvichinyanya kuoma kugadzira zvemuno maapplication ayo anoshanda zvine mutsindo pamadhizaini.
Izvi zvinounza dambudziko rakakura kune mutengesi uyo ari kuyedza kupa yakaenzana yevatengi ruzivo kuburikidza nema mobile apps. Iyi tsika yazvino yekuvandudza maapps mumutauro wechizvarwa wechigadzirwa haingowedzere basa chete, asi zvakare inotungamira kune akawanda akapusa uye akavhurika misiyano pamidziyo. Misiyano mukugadziriswa kwechigadzirwa inodzikisira ruzivo rwevashandisi zvakanyanya.
Saka, isu tinobata sei dambudziko iri?
HTML5. Kushandisa HTML5 sepuratifomu yeiyo nharembozha inopa chaiyo yekuona uye inoshanda mhedzisiro pane ese madhizaini: Android, iOS, uye kunyange echinyakare webhu mabhurawuza. Vhidhiyo uye midhiya rutsigiro, yakachena kodhi, zvirinani kuchengetedza - izvi zvese zviri mabhenefiti ekushandisa HTML5.
Uri kushandisa HTML5? Nei uchidaro?
Tags: Content Marketinghtml5m-commerceMobile musikaMobilesmahwendefa
12 Mibvunzo Yekutanga Peji Dhizaini